lonetone: discipline ဆိုတာ စည်းကမ်း မဟုတ်ပါ...
discipline ဆိုတာ စည်းကမ်း မဟုတ်ပါလို့ ဆိုလိုက်လို့ ဒီကောင်တော့ ကြောင်နေပြီလို့ ထင်နေမလားပဲ။
ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး အများသောအားဖြင့် discipline လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ စည်းကမ်းကို သွားမြင်၊ သတိရကြမှာပါ။ မကြာခဏလည်း စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးမိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ ယေဘုယျအားဖြင့် မကြာခဏဆိုသလို ပြောနေကြတဲ့ ငါတို့ နိုင်ငံမတိုးတက်တာ စည်းကမ်းမရှိကြလို့၊ သူတို့နိုင်ငံတွေ တိုးတက်တာ စည်းကမ်းရှိကြလို့ စသဖြင့် စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုလည်း ကြားဖူးနေကြမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်အခုပို့စ်မှာ ဆိုလိုချင်တဲ့ discipline ကတော့ ပညာရေးဆိုင်ရာ Academic အသုံးအနှုန်း discipline ကို ဆိုလိုပါတယ်။ အမှုမဲ့၊ အမှတ်မဲ့ နေမိကြလို့ မေ့နေတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို့ချက်လေးကို ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။ ဒီစကားကို ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ပါမောက္ခများ၊ ပညာရှင်များ မကြာခဏ သုံးစွဲပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေ အမြဲတမ်းလိုလို အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်ကို ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက မဟာဘွဲ့တန်း ပထမနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက် (First Semester) စတက်တုန်းက မိခင်ဌာနက credit ချိတ်ဆက် ယူခွင့်ပြုတဲ့ အခြားဌာနက ဘာသာရပ်တစ်ခုကို သွားတက်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခက ကျွန်တော့်ကို သူ့အတန်းကျောင်းသားအဖြစ် လက်မခံခင် သူ့ရဲ့ကျောင်းသားများရှေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို လက်ခံသင့်-မခံသင့် (၁၅) မိနစ်ခန့် တရစပ် မေးခွန်းများမေးပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒီကစ ကျွန်တော်နဲ့ discipline စတွေ့တာပါပဲ။
ပါမောက္ခက ကျွန်တော့်ကို အခုလို မေးပါတယ် What was your undergraduate discipline? ကျွန်တော်လည်း ရုတ်တရက် ဘာပြန်ဖြေရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပါမောက္ခက ကျွန်တော် နားမလည်မှန်းသိတော့ သူ့ရဲ့တပည့်များ (အဲဒီအတန်းမှာ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ Turkmenistan နဲ့ ကျွန်တော် အပါအ၀င် ၆ ဦးသာ ရှိပါတယ်) ကို လှည့်မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတော့မှ ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ discipline ဆိုတာ ကိုယ် အထူးပြုတဲ့ဘာသာရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ Economics, Politics, Sociology, Law, Education, Management, Anthropology, International Relations စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေဟာ ပညာရေးနယ်ပယ်ရဲ့ discipline တွေဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် discipline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်တာတွေကို သင်ပြပေးပါတယ်။ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ ပထမဆုံးနေ့မှာ ရတဲ့ ပထမဆုံး ပညာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ major လို့ပဲ အများအားဖြင့် သုံးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ native speaker တွေကတော့ discipline ကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ကြပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားအများစုကို What was your (undergraduate) major? လို့မေးရင် သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ What did you specialized in your undergraduate studies? (သို့) your specialized subject လို့ မေးမှသာ နားလည်ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘာသာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ သိလာတာကတော့၊ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ ပညာရေးဆိုင်ရာ Journals, Articles နဲ့ Lectures များ လေ့လာရာမှာ ခွဲခြားတတ်စေဖို့ပါ။ ဥပမာ - ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်။ သီးခြားခွဲခြားပြီး လေ့လာလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ - Law and Economics, Law and Politics, Economics and Politics, Education and Management စသဖြင့် discipline တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု ထပ်ပြရရင် Governance ဘာသာရပ်မှာ Politics နဲ့ Management ဟာ main discipline ဖြစ်ပြီး၊ Economics, Sociology နဲ့ Law တို့ဟာ အရေးပါတဲ့ တွဲဖက်လေ့လာရမယ့် discipline များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိဖတ်တဲ့ ဆောင်းပါး၊ သင်ယူတဲ့ ပို့ချချက်ဟာ ဘယ် discipline ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသလဲ၊ နောက်အခြားဘယ် discipline နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်သလဲ ဆိုတာ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့ ယူကြမယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေနဲ့ အဓိက သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘာသာရပ်ပေါ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ နားလည်မှုစွမ်းအား တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်လေး အဆုံးမသတ်ခင်မှာ အဘိဓါန်များမှာ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ discipline ရဲ့ စည်းကမ်းမဟုတ်သော ဖွင့်ဆိုရှင်းပြချက်များကို လေ့လာနိုင်စေဖို့ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
discipline - an area of knowledge;asubject that people study or are taught, especially inauniversity: The new recruits were drawn fromarange of academic disciplines. (Oxford Advanced Genie)
discipline - (subject)aparticular area of study, especiallyasubject studied atacollege or university (Cambridge Advanced Learner's)
Posted by lonetone at 7:13 AM
Nge Naing January 18, 2010 at 4:35 AM
ပို့စ်ကောင်းလေးတွေကို တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ နောက်မှ အချိန်ယူပြီး အရင်ပို့စ်တွေကို ပြန်လာဖတ်မယ်နော့်။ ငယ်ငယ်က ပညာကို ကောင်းစွာ မသင်ခဲ့ရလို့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူငယ်တွေကို အားပေးပါတယ်။ ကြိုးစားပါ။ အစ်မဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ C-B0x ဘာဖြစ်လို့ မတားတာလဲ။
lonetone January 21, 2010 at 9:19 AM
စာလာဖတ်မယ်ဆိုလို့ ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုကြောင်းပါ ခင်ဗျား။